Ukubuyekezwa Kwephrinta ye-Wanhao Duplicator 3 7D | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Sihlaziya iphrinta I-3D Wanhao Duplicator 7, a imishini wokucabanga SLA usebenzisa resin photosensitive ukuhlanganisa imiklamo yethu ngesinqumo esihlukile.
Wanhao ingumkhiqizi wase-Asia owaziwa kakhulu emphakathini woMenzi ngezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo anayo kukhathalogi yakhe kanye nenani lekhwalithi / lentengo enhle kakhulu kuyo yonke. Kuze kube manje inkampani ibigxile kuphela ekwenzeni imikhiqizo ngokususelwa ekuphrinteni kwe-FDM, ngalokhu kwethulwa banyakazise imakethe ngokwethula iphrinta ngentengo ephansi kakhulu kunabanye abancintisana nabo
Njengoba ukuphrinta usebenzisa i-stereolithography kuyindlela ehluke kakhulu ekuphrinteni kwe-FDM esivame ukukhuluma ngakho kubhulogi, sizochaza okuncane ngokuhluka okuvame kakhulu kwalobu buchwepheshe esingabuthola kumaphrinta e-3D athengiswa njengamanje.
1 Ukuphrinta kwe-DLP vs SLA vs MSLA
1.1 Ukuphrinta kwe-DLP
1.2 Ukuphrinta kwe-SLA
2 Ukuqhathaniswa kwemikhiqizo efanayo
3 Imininingwane yephrinta nezici zobuchwepheshe
4 Ukwenza ngcono phakathi kwezinguqulo
5 Unbox nokuqala kwephrinta ye-Wanhao Duplicator 3 7D
6 Izici ezikhethekile zokuphrinta kwe-SLA
6.1 Ukwelashwa Kwe-Post Impression
7 Ngemuva kwensizakalo yokuthengisa nokusekelwa okuvela kuMphakathi Womenzi
8 Ukuxhumana, ukusebenza okuzimele nezinhlelo zokusebenza ezisekelwayo
9 Intengo nokusatshalaliswa
11 Umbono woMhleli
12 Izinzuzo nokuqeda
Ukuphrinta kwe-DLP vs SLA vs MSLA
Iphrojektha yedijithali isetshenziselwa ukukhanyisa isithombe esihambisana nesendlalelo esisodwa. Uma sekuhlanganisiwe, lolu ungqimba lususwa endaweni yalo futhi izingqimba ezilandelayo zihlanganiswa ngokulandelana. Ngoba isithombe sesendlalelo ngasinye kukhonjiswe ngamadijithi, siqukethe amaphikseli amaningi ayizikwele, okuholele kungqimba olwakhiwe ngezitini ezincane ezingunxande ezibizwa ngama-voxels ahlangana eduze kwe-axis kaZ.
Kusetshenziswa i-laser ye-UV ukudweba ungqimba ngalunye lwento nezibuko ezimbili eziqhutshwa yizimoto, ezaziwa ngokuthi ama-galvanometers (eyodwa ku-X axis nenye ku-Y axis), zisetshenziselwa ukukhomba i-laser ngokushesha endaweni yokuphrinta, kuqinise i-resin lapho ihamba. Ngemuva kokuqedwa kongqimba, kuyaphenywa futhi inqubo iyaphindwa kuzo zonke izingqimba entweni. Idizayini kufanele idilizwe, ungqimba ngongqimba, kube uchungechunge lwamaphoyinti nolayini. I-laser, isebenzisa ama-galvanometers, ilandelela lesi setha sokuxhumanisa ku-resin.
I-matrix ye-LED isetshenziswa njengomthombo wayo wokukhanya ngokuhlangana ne-LCD photomask ukuze ulolonge isithombe esikhanyayo se-matrix ye-LED. Njenge-DLP, I-LCD photomask iboniswa ngamadijithi futhi yakhiwe ngamaphikseli ayisikwele. Ubungako bamaphikseli buyehluka kuye ngokuthi i-LCD photomask yenziwa kanjani futhi amaphikseli ngamanye avaliwe esikrinini se-LCD ukuvumela ukukhanya kwe-LED kudlule kudale ubungako obuvelayo. Usayizi we-pixel we-LCD photomask usethwe ngokususelwa ekutheni uhlu lwe-LED lwenziwa kanjani.
Kungabonakala ukuthi Ukuphela kwamaphrinta we-SLA anentengo evunyelwe kuseduzeEmakhasini wokuthenga ase-Asia afana ne-Aliexpress singathola amaphrinta ahlukile we-SLA anezintengo ezifanele. Kulesi silinganiso sikhethe imodeli ehlaziyiweyo, izinketho ezimbalwa ezivela kubakhiqizi abakhulu emkhakheni kanye nomkhankaso we-kickstarter esifisa impumelelo enkulu kuwo ngoba sinethemba lokuthi izobeka umugqa kubo bonke abanye abakhiqizi ezinyangeni ezizayo.
Imininingwane yephrinta nezici zobuchwepheshe
Iphrinta ye-Wanhao Duplicator 3 DLP 7D iyithuluzi elinobukhulu obuqukethe kakhulu esingababeka noma kuphi ekhaya noma ehhovisi lethu. Izipikili zivuliwe ubukhulu kancane 200x200x430 mm sineqembu elincane futhi elide elingenayo i- i-peso ngokweqile 12 AmaKh.
Iphrinta ine- Ivolumu yokuphrinta eyi-120x70x200mm futhi a Isixazululo sesendlalelo se-micron esingu-35. Ngalezi zici la maqembu agxila emandleni phrinta izinto zokunemba ngemiklamo eyinkimbinkimbi kakhulu nemininingwane engapheli. Amagugu okuhloba, odokotela bamazinyo, abalandeli be-wargame, abaklami nabaculi be-3D bazothola umlingani ongenakuhlukaniswa kuleli qembu.
Nge isivinini 30mm / h (ipharamitha ezoncika kuzimpawu zokuphulukisa ze-resin esetshenzisiwe) Imishini ka-Wanhao ivelele njengomunye wemishini esheshayo ekuqhathaniseni. Ukubheka lokhu, ukuphrinta into engama-20 cm kungathatha amahora afinyelela kwayishumi.
Iphrinta isebenzisa i ubude bebanga 395-405 nm futhi iyahambisana nezinhlaka eziningi ezitholakala emakethe. Ukuba nokulungisa kuphela imingcele yokwelapha ukuze ikwazi ukushintsha isuke kokunye iye kokunye.
Iphrinta inokwakhiwa okuqinile, konke okwenziwe ngensimbi emnyama engabonakali.
Ukunikezwa kwamandla kuyinto yangaphandle.
Singahlukanisa izinto eziyibhala kanjena:
Ikhava: kuyinto ekhishwayo enesibopho sokumboza iphrinta yethu ukuze kuthi ngenkathi isebenza ingalimazi ukubona kwethu ngokuvezwa ukukhanya kwe-UV. Futhi ivikela i-resin tray yethu emithonjeni yangaphandle ye-UV lokho kungalimaza umbono wethu. Yinto eyenziwe ngokuphelele ngensimbi, eqinile kepha esindayo. Ayinazo izibambo zokukwazi ukuyisebenzisa kalula futhi Kunganxaneleka ukuthi kungafihli lutho ukuze ithreyi le-resin libonakale ngenkathi kusenziwa umbono.
Umzimba ongezansi: ifaka ezinye izinto futhi iyinto eyinhloko yephrinta yethu. Ngaphambili sithola uphawu lomkhiqizi nenkinobho yamandla. Ngaphakathi kufakwe yonke i-elektroniki edingekayo ukwenza isethi isebenze. Sihlolile ifayela le- design ayisebenzi ngokuya komoya ukupholisa izinto zikagesi. Le mininingwane ingadala izinkinga ngemishini ekuprinteni okudinga amahora amaningi.
Ingalo Z eksisi: yinto ephethe i- yakha ipulatifomu yokushintsha ukuyihambisa kude nendawo elaphayo njengoba kudalwa izingqimba. Iqukethe i- induku ebunjiwe ngokunemba lapho ukuhamba kwesithuthuthu kuhamba khona. Ukuhlangana phakathi kwenduku nemoto kuqine kakhulu futhi kwesinye isikhathi amaphutha wokuphrinta angabonakala njengomphumela.
Isisekelo sokuphrinta: Ipulatifomu esusekayo lapho ukuphrinta kwethu kuzonamathela kuyo futhi ihambisane ne-eksisi kaZ
Ukuma kwe-eksisi ye-Z: Inzwa ye-Optical ephethe ukumisa umbhede wokuphrinta uma usesikrinini seLCD
I-Wanhao Duplicator 7 ifakwe i Isikrini se-HD LCD esinikeza ukulungiswa kwamaphikseli angama-2560 x 1440. Itreyi enezansi esobala ibekwe ngaphezulu kwayo, okuvumela ukukhanya kwe-UV kusuka esikrinini se-LCD ukuba kuqinise i-resin. Phansi kwethreyi (okwaziwa kakhulu ngokuthi i-FLEXBAT njengoba kuyishidi eliguquguqukayo nelisobala) kuyisici esiphatha kabi ukugqoka ngenxa yokusabela kwamakhemikhali ekwelapheni i-resin, singashintshwa lapho sonakele kakhulu.
Ukwenza ngcono phakathi kwezinguqulo
Iphrinta yeWanhao Duplicator 3 7D iyi- iqembu eliguqukayo njalo. Umenzi unake ukuphawula kwamakhasimende akhe futhi usevele wenze izinguquko ezimbalwa ukulungisa zonke izinkinga ezibikiwe kubo. Ngokuqondile enguqulweni yakamuva etholakalayo bonke ubuthakathaka esishilo ngaphambili bulungisiwe. Lesi simo sengqondo sinika i-Wanhao inani elengeziwe ebesilithanda kakhulu.
Sikunikeza isifinyezo esincane se- inguqulo 1.4 yokulungiswa iphrinta:
Ukukhweza nokuxhuma kwe-UV LED kuyathuthukiswa ukugwema izinkinga zikagesi
Inkinobho yamandla ihanjiswe ngemuva kwephrinta.
I-Brass nut ku-Z induku yokunyakaza okuqondile. Uhlelo lokuqinisa luyathuthukiswa ukuvikela induku futhi luyinikeze ukugxila okungcono.
I-fan yokupholisa i-UV (60mm) nosayizi we-heatsink inyuke ukuze ipholile kangcono. Ukuvulwa okwengeziwe kungezwe ngemuva kwephrinta ukuze kutholakale ukuhamba komoya okungcono. Kwengezwe umlandeli wesibili ohlangothini lwe-60mm ukuqinisekisa ukuthi i-motherboard ipholile futhi icala linomoya.
Isibonisi esisha esibunjiwe sinokukhanya okungcono.
Ukunikezwa kwamandla kwangaphakathi okusha okungu-70W.
Ipulatifomu yokwakha manje seyenzelwe ukubekezelelana kwe- + 0,03mm.
Unbox nokuqala kwephrinta ye-Wanhao Duplicator 3 7D
Ukubheka inani lamakhilomitha iphrinta elihambile ukufinyelela ezandleni zethu ( imishini ithunyelwe ivela China), ufike esimeni esingaphezu kokwamukelekayo. Akukho monakalo obonakalayo ekupakisheni. Kuvidiyo engezansi ungabona imininingwane.
Kodwa-ke, lapho sizama ukuvula imishini sithole ukuthi inkinobho yamandla ibingasebenzi, ngemuva kokubheka izinkundla ezisetshenziswe kakhulu sithole ukuthi kujwayelekile ukuthi ikhebula likhululeke ngesikhathi sokuthumela . Kuxazululwe inkinga, bekunezintambo ezimbalwa ezikhululekile.
Iphrinta ayizimele yodwa futhi idinga i-PC noma imishini efanayo exhunywe kuyo ngekhebula le-USB ne-HDMI. Emibhalweni kunamathiselwa isixhumanisi sokulanda isoftware ebhokisini ledrop mahhala. Amanyuwali afaka phakathi izithombe-skrini zendlela yokulungiselela isoftware yokuphrinta emawindini. Inkinga yesibili, ukunaka imanuwali asinayo umbono ovumelekile. Ngemuva kwama-imeyili ambalwa anensizakalo yobuchwepheshe yomkhiqizi, sithole amapharamitha afanele okwenza sibonakale okokuqala..
Ubhekene nezinkinga ezifundwa ngokushisa wezinguqulo zokuqala zephrinta nethimba lethu libe ngelinye "elithintekile", sanquma ukushiya igumbi lapho i-elektroniki itholakala ivulekile ukwenza ngcono ukungena komoya futhi sixhume i-HDMI yethu ngqo kumasekethe esikhundleni sokusebenzisa isandiso esincane esifakiwe. Leli phuzu lilinde isixazululo esichazayo.
Esethu isisekelo sokuphrinta sifinyelele kithi ngokuphelele futhi akudingeki ukuthi senze ushintsho kuyo sonke isikhathi sokuhlolwa. Lapho isisekelo sesisendaweni engu-0 ye-eksisi ye-Z, kufanele sithinte ngokuphelele ishidi le-flexibat, ngaphandle kwalokho sinezikulufo ezi-4 esingazilungisa ukuze sizilinganise.
Enye yemininingwane esikhanga kakhulu ngesikhathi sokuphrinta yilelo iphrinta ithule kakhulu, awuzwa neze umsindo owenziwe yimoto okuwukuphela kwayo efaka intaba. Yeka umehluko uma uqhathaniswa nabaphrinta be-FDM !!
Lapho nje sibona into yokuqala ephrintiwe, sikhohlwa konke okusenze sahlupheka, ikhwalithi yokuphrinta ihlukile futhi iphakeme kakhulu kunalokho okungafinyelelwa ngephrinta ye-FDM. Ngemuva kwamaphrinta ayishumi nambili sikuqinisekisa lokho isivuno esikhulu kakhulu se-resin nezinto ezincane kakhulu kusetshenziswa ekuphrinteni ngakunye.
Izici ezikhethekile zokuphrinta kwe-SLA
Umbono e-resin inokubaluleka kokuthi kwenziwe kusuka phezulu kuya phansi Ngakho-ke, wonke amaphuzu ento ephrintiwe kufanele ananyathiselwe ngandlela thile kwisisekelo sokuphrinta ukuze angawi phansi kwethileyi ngaphansi kwamandla adonsela phansi. Le mininingwane ihumushela ku- imidiya yokuphrinta ibekwa kumiklamo ezophrintwa ngendlela ethile.
Ukusebenzisa uketshezi kunoma iyiphi inqubo yokukhiqiza kuhlala kunezela ubunzima. Esimweni sethu, uketshezi okukhulunywa ngalo luyinto yokubonisa futhi luqukethwe ku-cuvette onamandla aphelile. Lokhu kusho ukuthi yonke inombolo ethile yokuvelayo futhi kuya ngosayizi wezingcezu eziphrintiwe kuzofanele sigcwalise nge-resin eningi. Ukuze imibhalo yethu iqedwe kahle kufanele ngaso sonke isikhathi kube nevolumu eyengeziwe yenhlaka kuthileyi kunevolumu ezophrintwa.
Njengoba isikrini se-LCD sidinga isikhathi nomzamo ofanayo wokukhanyisa ngokwengxenye futhi ngokugcwele, Singaphrinta izinto eziningi ngendlela esilingana ngayo endaweni yokuphrinta ngaphandle kokuthinta isikhathi esidingekayo noma ikhwalithi etholakele.
Ukwelashwa Kwe-Post Impression
Izinhloso ephrintiwe resin abakulungele ukusetshenziswa. Asanda kunyatheliswa anokuguquguquka okungafuneki nokuba brittleness futhi zimbozwe ngokuphelele nge-resin esimweni soketshezi. Kumele senze ukwelashwa ngezicucu ukuze sizishiye zisesimweni esifunayo. Izingcezu kufanele zifakwe imizuzu eyi-10 otshwaleni futhi isitsha okucwiliswe kuso kufanele sibekwe elangeni noma kunoma yimuphi omunye umthombo we-UV. Ngale ndlela yokwelashwa sizothola izingcezu ezinezakhiwo ezingcono zomshini futhi zihlanzeke ngokuphelele. Abanye abakhiqizi abanjengoFormLabs baqale ukudala imikhiqizo ethile yezentengiselwano ukwenza lokhu kwelashwa ngemuva kokuphrinta. Ekhaya singasebenzisa noma yisiphi isiqukathi esingangeni moya esigcwele utshwala (kusuka esitolo sezidakamizwa) futhi uma sinemininingwane eminingi singasebenzisa ithoshi le-UV elingathengwa ngentengo ephansi ezitolo eziku-inthanethi.
Ngemuva kwensizakalo yokuthengisa nokusekelwa okuvela kuMphakathi Womenzi
El Isevisi yokuthengisa ngemuva kokuqapha inake kakhulu futhi isixazulule konke ukungabaza kwethu ngesineke ngokuthumela imibhalo ngeposi. Kodwa-ke, kuyaqapheleka lokho ibanga lapho kuthengiswa khona kungukukhubazeka okukhulu okwenza ukwesekwa kobuchwepheshe kube nzima. Ukubuyisela imishini yethu kumenzi ukuze ilungiswe kalula kuba umsebenzi ongenakwenzeka ngenxa yezindleko zokuthumela eziphakeme. Futhi ayikho ingxenye eseceleni yemishini ethengiswayo kwiwebhusayithi yomkhiqizi, noma kunjalo ubunzima obuphansi bezinto ezisetshenzisiwe busivumela ukuthi sithole kalula noma yini esiyidingayo.
Kukho konke lokhu ukuthola umshini kulezi zimo kudinga ukubekwa phezulu kwe-DIY ukuze nathi sinakekele ukuxazulula izinkinga ezivelayo. Ukusuka ekubukeni kumathumbu abo ukuxhuma kahle yonke intambo ukuklama izingxenye ezidingekayo zokuhamba komoya okulungile kokupholisa izinto zikagesi. Ngenhlanhla singabenzi futhi lokhu kithi kuyinselelo enkulu kunenkinga.
Ubufakazi bokuthi lo ngumbono ojwayelekile womphakathi kaMenzi ungatholakala ku ubukhona be- Iqembu lomsebenzisi le-Facebook cishe amalungu angama-2000 lapho baxazulula khona izinkinga zomunye nomunye futhi baphakamisa ukwenziwa ngcono. Ngisho nomenzi ubukhona eqenjini futhi ingxenye yokuthuthuka okuhlongozwayo ifakiwe kuzinguqulo zakamuva kakhulu zeprinta. Ekuthatheni komphakathi futhi i-wiki enemibhalo ebanzi yenziwe lapho singazisekela khona ukuze siqonde kangcono ukusebenza kwemishini, senze ngcono futhi sixazulule ukungabaza kwethu.
Ukuxhumana, ukusebenza okuzimele nezinhlelo zokusebenza ezisekelwayo
Ukudluliswa komfanekiso wesendlalelo ngasinye kwenziwa kusuka kwimishini yangaphandle ngokusebenzisa I-HDMI. Ukulawulwa kwephrinta (izinjini namalambu) kwenziwa ngefayela le- I-USB port. Iphrinta ayikwazi ukusebenza ngemodi ezimele yodwa futhi kufanele ixhunywe ngaso sonke isikhathi kwikhompyutha edlulisa imiyalo yokuphrinta kubo.
Umenzi uhlongoza ukusebenzisa isoftware yeCreation Workshop yamawindi Ukusika nokulawula inqubo yokuphrinta, le yisoftware esiyisebenzise nemiphumela emihle kakhulu. Noma kunjalo umphakathi kaMenzi futhi kuphambi komkhiqizi futhi thina uphakamisa ukusetshenziswa kwe-raspberry nesithombe se-nanodlp ukuhlinzeka iphrinta ngamandla okuzimela. Ungathola imininingwane eminingi ngayo kuwebhusayithi yomenzi https://www.nanodlp.com
Leli qembu Ayisatshalaliswa eSpain singayithenga ku-AliExpress ngezindleko ze- € 360 + izindleko zokuthumela. Intengo engenangqondo uma iqhathaniswa nekhwalithi yezingxenye eziphrintiwe kanye nezindleko zemishini efanayo.
Inhlaka iyathengiswa ebiza kakhulu kunentambo ye-FDM izindleko ezijwayelekile ze- 1 ilitha resin cishe 100 €. Kodwa-ke, kucatshangelwa uhlobo lokuphrinta oluhloselwe lolu hlobo lwezinto (izinto ezincane ezinemininingwane ephezulu nobunzima), ukuthenga okukodwa kuqinisekisa ukubonakala okuningi.
La Iphrinta yeWanhao Duplicator 3 7D iyiqembu elijwayelekile lokho kuvule amehlo ethu emhlabeni omusha ophrintiwe nge-3D. Sizokwazi phrinta izinto ekhaya noma ehhovisi nge ikhwalithi ehlukile nomsindo ophansi.
Asinaso isipiliyoni semishini esebenzisa lobu buchwepheshe bokuphrinta kepha sinikezwe umehluko omkhulu wentengo waleli qembu nezimbangi zalo akunakuphikwa ukuthi kubathengi abaningi kuzoba ukukhetha okusobala. Ukusetshenziswa kwale mishini kuzokulethela izinjabulo eziningi, inqobo nje uma ungabenzi beqiniso abakwaziyo ukuxazulula izinkinga ezingase zivele ngokwakho.
Ngabe unentshisekelo ikakhulukazi kuleli qembu noma kwabanye abavela e-Wanhao? Ngabe ufuna senze isifundo ngezinyathelo ezifanele zokusetshenziswa kwaso? Ungathanda ukubona ukuhlaziywa kwezinhlaka ezahlukahlukene esingazisebenzisa nale phrinta? Sishiyele ukuphawula ngendatshana futhi sizofunda ngamathuba ahlukahlukene wokuqedela ulwazi lwale mishini nalo mkhiqizi.
I-WANHAO DUPLICATOR 7
Inani elikhulu lentengo
Ukuphrinta okuphelele okunemininingwane eyinkimbinkimbi
Ukusekelwa okungafani nomphakathi wabenzi
Idizayini encane elingana noma yikuphi
Ayinayo insizakalo yobuchwepheshe noma ukusatshalaliswa eSpain
Imibhalo yokuqala iyadida
Umenzi akazithengisi izingxenye ezisele
Akuwona Umthombo Ovulekile
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Ukubuyekezwa Kwephrinta ye-Wanhao Duplicator 3 7D
Kade ngangibuka iphrinta isikhathi eside, kubize malini ukudlula emasikweni? ngoba yikho okungenza ngibuye ...
UToni de Frutos kusho
Yebo, kuya ngokuthi ipulatifomu oyithengayo uyithumela kanjani. Uma ungamemezeli futhi wenza ukuthunyelwa okunelebuli njengesipho noma ukumemezela inani eliphansi, ungakuthola mahhala. Uma iphakethe limenyezelwa noma amasiko ehlangana uzoba nokukhokhiswa okungaphezulu nokubambezeleka.
I-ejensi yentela imininingwane kwiwebhusayithi yayo imininingwane yokubala:
Phendula uToni de Frutos
Ngiyabonga kakhulu ngokuhlaziywa.
Ingabe i-silicone iphunga kakhulu? Ingabe inuka kakhulu uma iphrinta?
Ukhuluma ngobuningi besendlalelo kepha siyini isixazululo x / y?
Ngabe i-silicone eyeqile isindisiwe futhi ungaphinda uyisebenzise?
Ngokuba nesigqoko esimnyama, kuyakutshela noma wazi kanjani ukuthi ingakanani imicu oyisebenzisayo?
Iyiphi inqubo okufanele uyenze ngemuva kokuphrinta ingxenye? (Ngifundile ukuthi ihlanzwa ngotshwala obuncane futhi kuphelele lapho)
I-resin inuka kancane, ikakhulukazi uma uqala ukuvula ibhodlela. Lapho iphrinta ingakhombisa okungaphezulu. Kepha akuyona into engathandeki.
Isinqumo se-xy sihlobene nephuzu elincane kunazo zonke okwazi ukudweba kusendlalelo (i-voxel) futhi lihlobene nokulungiswa kwesikrini. Ukulungiswa okuphezulu kwesikrini se-LCD, amachashazi amancane angawadweba.
I-resin eyeqile ingashiywa kuphrinta uqobo noma isuse ithreyi bese uyithululela emuva ebhodleleni lasekuqaleni noma elinye (oku-opaque).
Izinga le-resin ngeso. Kusetshenziswa i-resin encane kakhulu ekuphrintweni ngakunye. ukugcwalisa ithileyi kuqinisekisa ukubonakala okuningana ngaphandle kwezinkinga.
Utshwala busetshenziselwa ukuhlanza i-resin eyeqile engamanzi ehambisana nengcezu. Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukuthi ushiye imizuzu eyi-10 ngaphambi kwelanga noma umthombo wokukhanya kwe-UV. Okusho ukuthi, ubeka ucezu embizeni esobala enotshwala bese ulushukumisa ukuze ulihlanze. Ngemuva kwalokho ushiya imbiza elangeni imizuzu eyi-10 ukuze ucezu lukhuni kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu ngempendulo yakho nokushesha kakhulu, bengivele ngihlanye ngifuna imininingwane online ngisho nasezinkundleni ze-English kepha izinto ezithile bezingangicaceli.
Ake sibheke ukuthi ngiyithenga yini le phrinta ngokuthenga engikubonayo.
Ngiyabonga kakhulu ngale ndatshana. Kuyathakazelisa impela. Bengibheke le phrinta izinsuku ezimbalwa futhi ngiqoqa imininingwane ukuze ithengwe. Ngikukhuthaza ukuthi ufeze okokufundisa okukhulunywe ngenhla, ukuthi ungathola kanjani ukusebenza kahle kwehardware / isoftware kanye nezinhlaka ezifanele kakhulu. Zizoba wusizo kakhulu emphakathini engicabanga ukuthi uzokhula.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho !!
Sizokwazisa ukuthi kungenzeka yini ukwenza izindatshana eziningi ngaleli qembu. Hlala ubukele ibhulogi !!
Sawubona, ngicela ungitshele ukuthi isebenza kahle ngama-resins ahlekayo?
Sawubona, siyakuhalalisela ngomsebenzi omuhle, ngicele umusa omkhulu nje, ungancoma umthengisi othembekile noma okungenani oyedwa owaziwayo, ngiyabonga.
UMilton Farfan kusho
Sawubona ekuseni, bengizazisa ngale phrinta ngakho konke ukusesha engikubona kungabiza kakhulu futhi kubonakala kuyindlela enhle, ngiyidinga kakhulu ukwenza umsebenzi wobucwebe ngakho-ke ngidinga izinga lokunemba nemininingwane eyamukelekayo kakhulu, mina unemibuzo ethile yokuthi ungazi kanjani isilinganiso samaringi angingathola ilitha le-resin? unayo isoftware ngeSpanishi?
Phendula uMilton Farfán
Unjani! Angingabazi. Uma ngasiphi isikhathi esithile ngifuna ukuguqula amakhompyutha futhi ngikhiphe uhlelo, ingabe luzongivumela ukuthi ngisebenzise kabusha iphasiwedi yesoftware kukhompyutha entsha?